FOMBA 10 HANAMBOARANA ANDROID MIFANDRAIKA AMIN'NY WIFI FA TSY MISY INTERNET - MALEMY
Fomba 10 hanamboarana Android mifandraika amin'ny WiFi fa tsy misy Internet
Olana iray mahazatra indrindra amin'ny telefaona Android ny tsy fahafahany mifandray amin'ny Internet na dia mifandray amin'ny WiFi aza. Tena mahasosotra izany satria manakana anao tsy hiditra amin'ny Internet. Nanjary ampahany lehibe amin'ny fiainantsika ny Internet ary mahatsapa ho tsy manan-kery isika rehefa tsy mifandray amin'ny Internet. Vao mainka mahasosotra kokoa isika na dia eo aza ny fametrahana ny router WiFi, voasakana tsy hifandray amin'ny Internet isika. Araka ny efa voalaza tetsy aloha, dia olana iraisana ity ary mora vahana. Amin'ity lahatsoratra ity dia hampianatra anao ny fomba hamahana ity olana manelingelina ity izahay. Hitanisa andiana vahaolana izahay mba hialana amin'ny hafatra manelingelina an'ny WiFi tsy misy fidirana amin'ny Internet.
Amboary ny Android mifandray amin'ny WiFi fa tsy misy fidirana Internet
Fomba 1: zahao raha mifandray amin'ny Internet ny Router
Fomba 2: vonoy ny angona findainao
Fomba 3: Hamarino tsara fa marina ny daty sy ny ora
Fomba 4: hadinoy ny WiFi ary hifandray indray
Fomba 5: Hamarino tsara fa tsy manakana ny fivezivezena ny Router
Fomba 6: ovao ny DNS-nao
Fomba 7: ovao ny maody Wireless amin'ny Router
Fomba 8: Atsaharo ny router
Fomba 9: Avereno ny fametrahana ny tambajotra Android
Fomba 10: Manaova famerenana orinasa amin'ny findainao
Mety ho toa hadalana izany nefa amin'ny fotoana isehoan'io olana io satria tsy misy internet. Ny antony maha-router WiFi anao tsy mifandray amin'ny Internet. Mba hijerena fa ny olana dia misy amin'ny WiFi anao, mampifandray fotsiny amin'ilay tamba-jotra mitovy amin'ny fitaovana hafa ary jereo raha afaka miditra amin'ny Internet ianao. Raha tsy izany dia midika izany fa avy amin'ny router ny olana.
Mba hamahana ny olana dia jereo aloha raha tariby ethernet mifandray tsara amin'ny router ary avereno ny router. Raha mbola tsy voavaha ny olana dia sokafy ny rindrambaiko router na tsidiho ny tranokalan'ny mpamatsy tolotra internet hijerena raha tafiditra ianao. Ataovy izay hahazoana antoka fa marina ny mombamomba anao. Raha misy lesoka dia ahodino ary avy eo manandrama mampifandray indray. Andramo ihany koa ny mitsidika tranokala samihafa mba hahazoana antoka fa tsy ny olana dia noho ianao manandrana miditra amin'ireo tranonkala voasakana.
Amin'ny fotoana sasany, ny angon-drakitra finday dia mety hiteraka fanelingelenana ny Famantarana Wi-Fi . Manakana anao tsy hampiasa Internet izany na dia efa nifandray tamin'ny WiFi aza. Rehefa eo ny safidin'ny WiFi na angona finday dia mifidy WiFi ho azy i Android. Na izany aza, misy tamba-jotra WiFi sasany mila anao hiditra alohan'ny hampiasanao azy ireo. Azo atao izany fa na dia aorian'ny fidiranao amin'ny rafitra Android aza tsy ahafantarana azy ho toy ny fifandraisana Internet milamina. Noho io antony io dia mivadika ho angona finday izy io. Mba hisorohana an'io fahasarotana io dia vonoy fotsiny ny angona findainao rehefa mifandray amin'ny tamba-jotra WiFi. Hisintona fotsiny avy eo amin'ny takelaka fampandrenesana hahazoana miditra amin'ny menio mitete ary tsindrio ny kisary data tahiry finday hamonoana azy.
Raha ny daty sy ny fotoana aseho amin'ny telefaoninao dia tsy mifanaraka amin'ny faritry ny toerana misy anao, dia mety hiatrika olana mifandray amin'ny Internet ianao. Matetika, ny telefaona Android dia mamaritra ny daty sy ny ora amin'ny alàlan'ny fahazoana vaovao amin'ny mpamatsy tamba-jotra anao. Raha tsy nankatoavinao io safidy io dia mila manavao tanana ny daty sy ny fotoana isaky ny mifamadika ny faritry ny fotoana ianao. Ny safidy mora kokoa amin'ity dia ny fanodinanao ny famerenana daty sy ny ora mandeha ho azy.
1. Mandehana mankany Fikirana .
2. Tsindrio ny Valan'ny rafitra .
3. Safidio izao ny Safidy daty sy ora .
4. Aorian'izany, toggle fotsiny ny switch on famaritana daty sy ora mandeha ho azy .
Fomba iray hafa hamahana ity olana ity ny fanadino fotsiny ny WiFi ary hifandray indray. Ity dingana ity dia mitaky anao hampiditra ny teny miafin'ny WiFi, ka alao antoka fa manana ny tenimiafinao marina ianao alohan'ny tsindrio ny safidy Hadino WiFi. Vahaolana mahomby io ary matetika mamaha ny olana. Ny fanadinoana sy ny fifandraisana amin'ny tamba-jotra dia manome làlana IP vaovao ho anao ary mety hanamboatra ny olan'ny fifandraisana Internet izany. Mba hanaovana izany:
1. Hisintona ny menio mirotsaka avy eo amin'ny takelaka fampandrenesana eo an-tampony.
microsoft edge mandeha miadana be
2. Tsindrio lava izao ny mariky ny WiFi hanokafana ny lisitry ny Tambajotra WiFi .
3. Ankehitriny tsindrio fotsiny ilay anaran'ilay Wi-Fi izay ifandraisanao.
4. Tsindrio ny Safidy ‘manadino’ .
5. Aorian'izay, tsindrio fotsiny ilay WiFi iray ihany ary ampidiro ny teny miafina ary kitiho ny mifandray.
Ary zahao raha mahavita ianao amboary ny Android Connected amin'ny WiFi fa tsy misy olana amin'ny fidirana amin'ny Internet. Raha tsy izany dia tohizo amin'ny fomba manaraka.
Misy vintana lehibe mety hanakanan'ny router anao ny ampiasainao tsy hampiasa Internet. Manakana ny findainao tsy hifandray amin'ny tamba-jotra izany mba hidirana amin'ny Internet. Mba hahazoana antoka fa mila mitsidika ny pejy admin an'ny router ianao ary zahao raha voasakana ny id an'ny MAC anao. Satria ny router rehetra dia manana fomba hafa hidirana amin'ny toerana misy azy, tsara kokoa ny googleo amin'ny maodelinao ary hianatra ny fomba hidirana amin'ny pejy admin. Azonao atao ny manamarina ny ao ambadiky ny fitaovana ho an'ny Adiresy IP an'ny pejy admin / vavahady. Rehefa tonga eo ianao dia midira amin'ny anaranao sy ny tenimiafinao ary zahao raha afaka mahita fampahalalana momba ny fitaovanao ianao.
Mety misy ny olana amin'ny mpizara anaran'ny habaka amin'ny mpamatsy tolotra Internet anao. Andramo ity manandrana miditra amin'ny tranonkala amin'ny fanoratana mivantana ny adiresy IP-nao. Raha vitanao izany dia miankina amin'ny DNS (mpizara anarana domain) an'ny ISP anao. Misy vahaolana tsotra momba an'io olana io. Ny hany mila ataonao dia ny mifamadika amin'ny Google DNS (8.8.8.8; 8.8.4.4).
tapaka tampoka amin'ny Internet ny solosaina
2. Tsindrio lava izao ny marika Wi-Fi hanokatra ny lisitry ny Tambajotra Wi-Fi .
3. Peho izao ny anaran'ilay Wi-Fi ary tazomy io mba hahitana ny menio mandroso.
4. Tsindrio ny safidy Modify Network.
5. Safidio izao Fikirana IP SY ovay ho static .
6. Fenoy fotsiny izao ny adiresy IP static, DNS 1, ary DNS 2 IP .
7. Tsindrio ny bokotra Save ary vita ianao.
Vakio ihany koa: Fomba 4 hamakiana hafatra voafafa ao amin'ny WhatsApp
Ny router WiFi dia manana fomba tsy misy tariby samihafa. Ireo fomba ireo dia mifanaraka amin'ny bandwidth miasa. Ireo dia 802.11b na 802.11b / g na 802.11b / g / n. Ireo litera samihafa ireo dia mijoro ho an'ny fenitra tsy misy tariby. Ary amin'ny alàlan'ny default, ny mode tsy misy tariby dia napetraka amin'ny 802.11b / g / n. Mety tsara amin'ny ankamaroan'ny fitaovana io ankoatry ny fitaovana taloha sasany. Ny maody tsy misy tariby 802.11b / g / n dia tsy mifanaraka amin'ireo fitaovana ireo ary mety ho ny antony tsy olana amin'ny Internet Access. Mba hamahana tsotra izao ny olana:
1. Sokafy ny rindrambaiko ho an'ny Route Wi-Fi .
2. Mandehana any amin'ny sehatry ny Wireless ary safidio ny safidy ho an'ny maody Wireless.
3. Ankehitriny ianao dia hanao menio mitete-midina, tsindrio eo amboniny, ary avy amin'ilay lisitra mifidiana 802.11b ary avy eo tsindrio ny save.
4. Ankehitriny avereno ny router Wireless ary avy eo manandrama mampifandray indray ny fitaovana Android anao.
5. Raha mbola tsy mandeha io dia azonao atao koa manandrama manova ny maody ho 802.11g .
Raha tsy mahavaha ny olanao ireo fomba etsy ambony dia tonga ny fotoana tokony hamerenanao ny WiFi anao. Azonao atao ny mamono azy fotsiny dia mamadika azy indray. Azonao atao ihany koa ny manao azy amin'ny alàlan'ny pejy admin na rindrambaiko an'ny router anao raha misy safidy hamerenana ny WiFi anao.
Raha mbola tsy mandeha dia tonga ny fotoana famerenanana indray. Ny famerenana ny router WiFi anao dia hamafa ny toe-javatra voatahiry sy ny fikirakirana ISP. Io dia ahafahanao manangana ny tamba-jotra WFi avy amin'ny vato madio. Ny safidy hamerenana amin'ny laoniny ny WiFi anao dia hita eo ambanin'ny fandrindrana Advanced fa mety tsy mitovy amin'ny mpandeha isan-karazany. Noho izany, tsara kokoa raha mikaroka amin'ny Internet momba ny fomba famerenana mafy ny router WiFi ianao. Raha vantany vao vita ny famerenana dia mila miditra indray ireo fahazoan-dàlana hidirana ianao raha te hifandray amin'ny mpizara serivisy Internet anao.
Ny safidy manaraka ao amin'ny lisitry ny vahaolana dia ny famerenana amin'ny laoniny ny fikirana tambajotra amin'ny fitaovanao Android. Vahaolana mahomby izay manadio ny toerana sy tambajotra voatahiry rehetra ary mamerina manamboatra ny WiFi an'ny fitaovanao. Mba hanaovana izany:
1. Mandehana mankany Fikirana an'ny findainao.
2. Ankehitriny tsindrio ny Valan'ny rafitra .
3. Tsindrio ny Reset bokotra .
4. Safidio izao ny Avereno ny fametrahana ny tambajotra .
asa atao miafina etona amin'ny sakaiza
5. Ianao izao dia handray fampitandremana momba ireo zavatra izay hamboarina. Tsindrio ny Avereno ny fametrahana ny tambajotra safidy.
6. Andramo indray izao ny mifandray amin'ny tamba-jotra WiFi ary jereo raha hainao amboary ny Android Connected amin'ny WiFi fa tsy misy olana amin'ny fidirana amin'ny Internet.
Ity no vahaolana farany azonao andramana raha toa ka tsy mahomby ireo fomba rehetra voalaza etsy ambony ireo. Raha tsy misy zavatra mandeha hafa dia azonao atao ny manandrana mamerina ny findainao amin'ny toeran'ny ozinina ary jereo raha mamaha ny olana izany. Ny fisafidianana famerenana amin'ny laoniny dia hamafana ny fampiharana anao rehetra, ny angon-drakitra ary koa ny angona hafa toa ny sary, horonan-tsary ary mozika amin'ny telefaoninao. Noho io antony io dia tsara ny mamorona backup alohan'ny handehananao hamerenana amin'ny laoniny ny ozinina. Ny ankamaroan'ny telefaona dia mandrisika anao hamerina ny angon-drakitrao rehefa manandrana mamerina manamboatra ny findainao ianao. Azonao atao ny mampiasa ilay fitaovana namboarina ho fanohanana na fanaovan-tanana azy, anao ny safidy.
2. Kitiho ny Valan'ny rafitra .
3. Ankehitriny raha mbola tsy nanohana ny angon-drakitrao ianao, tsindrio ny safidy Backup anao raha te hitahiry ny angonao ao amin'ny Google Drive ianao.
4. Aorian'izany tsindrio ny kiheba Avereno .
4. Ankehitriny tsindrio ny Avereno ny safidin'ny telefaona .
5. Haharitra kely izany, ka avelao hirehitra mandritra ny minitra vitsy ny findainao.
Recommended: Esory ny tenanao amin'ireo andian-tsoratra amin'ny Android
Raha vantany vao manomboka indray ny telefaona dia manandrama mampiasa ny klavinao. Raha mbola mitohy ny olana dia mila mitady fanampiana matihanina ianao ary mitondra izany any amin'ny foibe serivisy.
Amboary ny windows 10 fitaovana tsy azo idirana BSOD, Bug Check 0x7B
Fahadisoana BSOD amin'ny fitaovana tsy azo idirana amin'ny fanombohana? Noho io hadisoan'ny efijery manga io dia miverimberina matetika ary tsy manomboka ara-dalàna? Amin'ny ankapobeny, ity lesoka ity (INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE) Bug Check 0x0000007B dia manondro fa ny OS dia tsy nahazo niditra intsony amin'ny angon-drakitra sy ny fizarazaran'ireo rafitra nandritra ny fanombohana.
Ahoana ny fametrahana ny adiresy IP static amin'ny Windows 10 PC (havaozina 2020)
Ity lahatsoratra ity dia miresaka momba ny adiresy IP, tsy mitovy amin'ny IP Static sy Dynamic IP ary ny fomba fametrahana adiresy IP static amin'ny Windows 10 PC.
Mametraha fetra farany ambony fetra ao amin'ny Windows 10
Amboary ny hadisoan'ny Windows Script Host amin'ny Startup Windows 10
Amboary ny fanaraha-maso ny volavola mifikitra amin'ny zoro havia ambony amin'ny efijery
Amboary ny lesoka Windows Update 0x80080005
Amboary ny Err_Connection_Mikatona ao amin'ny Chrome
Afindra mora foana ny mailaka avy amin'ny kaonty Gmail iray mankany amin'ny iray hafa
Mametraha tonian-dahatsoratry ny vondrona politika (gpedit.msc) amin'ny Windows 10 Home
Inona ny hitsin-dalana Keyboard ho an'ny Strikethrough?
Ahoana ny fomba hijerena tenimiafina WiFi voatahiry ao amin'ny Windows, macOS, iOS & Android
Fomba samihafa hanokafana didim-pitsarana avo lenta amin'ny Windows 10
excel tsy mamaly ny fomba fitsitsiana asa
miverina foana ny fanavaozana ny windows 10
Tsy miasa amin'ny solosaina finday i Netflix
windows 10 hdmi mankany amin'ny tv tsy mandeha
ny menio fanombohana hadisoana diso dia tsy miasa windows 10
netflix tsy mandeha amin'ny laptop